Fitantanana eo anivon’ny FMF: mikatso tanteraka ny fampandehanana ny baolina kitra | NewsMada
Fitantanana eo anivon’ny FMF: mikatso tanteraka ny fampandehanana ny baolina kitra
Mandalo fotoan-tsarotra tanteraka ny baolina kitra malagasy, amin’izao fotoana izao. Ny vokatra tsy misy, ny fitantanan-draharaha mikatso. Vokany, efa mizotra mankany amin’ny faharavana sy ny sazy henjana ny toe-draharaha.
Manara-maso akaiky ny toe-draharaha eo anivon’ny Federasiona malagasin’ny baolina kitra (FMF), ankehitriny ireo rafitra roa dia ny Kaonfederasiona afrikanina (Caf) sy ny Federasiona iraisam-pirenena (Fifa), ny amin’ny fitantanan-draharaha mivaralila, iainan’ity taranja mankarary ny Malagasy, ity.
Mikatso tanteraka mantsy ny fampandehanana ny baolina kitra eto Madagasikara. Miaina olana vaovao indray ny federasiona malagasy, amin’izao fotoana izao. Araka ny vaovao heno, mihidy tanteraka ny kaontin’ny federasiona ka tsy misy na inona na inona azo atao. Niainga tamin’ny fivoahan’ny resaka tamin’ny tambajotra serasera, ny faran’ny herinandro lasa teo, izay milaza io tranga io ho nataon’ireo olona tsy mankasitraka ny filohan’ny federasiona, Rabekoto Raoul Arizaka, izany.
Mangina ny birao ao Isoraka
Tsy misy intsony, araka izany, ny vola entina mampihodina ny fampandehanan-draharaha an-davanandro, ho an’ny baolina kira malagasy. Toa manamarina izany ny zava-misy etsy amin’ny foiben-toerana etsy Isoraka. Tsy misokatra ny birao ary zara raha misy tomponandraikitra miasa ao an-toerana, amin’izao fotoana izao.
Vokatr’izao zava-misy izao, ahina ny ho fanombohan’ny fifaninanam-pirenena “Orange Pro league”, ny asabotsy 4 desambra ho avy izao. Mety tsy hisy mpitsara hitantana izany fiadiana ny ho tompondakan’i Madagasikara, izany. Tsiahivina fa rafitra iray ao anatin’ny federasiona mantsy ny kaomisiona mpitsara (CCA), izay manendry ireo mpitsara amin’ny fihaonana nasionaly, toa izao.
Manoloana izao disadisa tsy ahitam-bahaolana izao, tsy maintsy ho avy ny fanapahan-kevitry ny Fifa, ka atahorana ny tsy fahafahan’i Madagasikara mandray anjara amin’ireo fifaninana karakarainy, mandritra ny taona maro.